Booson Niitii Fafee – Welcome to bilisummaa
Seenaa koo kaleessaa
Gurra naaf ergisaa!
Filannoon koo lama
Kaamoo mana bulkaa
Boosoo mana curgaa
Kaamon harka hallee
Booson garaa hallee!
Kan kaleessa ta’e
Yeroon irra lufee!
Hojiin isii gidiraa
Ormatu isiin firaa!
Aseennaan na dhuftee
Mana koo dhuunfattee
Anumatu si koorsee
Anumatu si goobsee
Duras si simadhee!
Sabni hunduu dhagayaa
Kaamo niitii faayaa
Booson adda bayaa!!!
Gamteessaa Sabaa(Amaan Tolaa)
Previous የሚኒልክን አረመኔያዊ ጭፍጨፋ የሚናስተዉሰዉ የታሪክ እሥራኛ ለመሆን ሳይሆን፣ የዛሬዎቹን የሚኒልክ ሕመኞችንም ለመቅበር ነዉ
Next Ethiopian Airlines co-pilot hijacks plane to seek Geneva asylum